Jona 9, 2018 Admin
Koreana manam-pahefana tsy mahita izay tsy ara-dalàna ny asa atao amin'ny Bithumb fanadihadiana
Ny fanadihadiana ho any amin'ny lehibe indrindra any Korea Atsimo fifanakalozana, Bithumb amin'ny alalan'ny manam-pahefana Koreana Tatsimo maro hita fa tsy nisy fanaovan-dratsy eo amin'ny orinasa hanamarina, na dia eo aza ny hetra lehibe volavolan-dalàna.
Bithumb manana hetra izao ny volavolan-dalàna 30 lavitrisa nahazo ny vola, izay dia atao hoe mitovitovy $28 tapitrisa.
Ny hetra volavolan-dalàna fa ny lehibe dia tsy tena mahagaga, toy ny sehatra nasain'i saram eo ho eo ny 0.3% ao amin'ny teny mafy $250 amin'ny fifanakalozana tapitrisa isan'andro.
Raha nasain'i Bithumb be izany ho an'ny po, izay midika fa ny orinasa manao Mahagaga endrika ny teny mafy $750,000 isan'andro, izay dia atao hoe efa ho $274 tapitrisa isan-taona.
Tags: bitcoin, vaovao
Ontolojia nandefa Tontolo Iainana Accelerator - Ontolojia Olympus Accelerator OOA
Ontolojia, a new high-performance public multi-chain project and a distributed trust collaboration platform, nanambara ny Ontolojia Olympus Accelerator (OOA).
Manasa ny fandaharana teknolojia sy ny manam-pahaizana vokatra manerana saha mba hiara-hiasa amin'ny fandraharahana ka hanao raharaham-barotra nizara vaovao mifototra amin'ny fampiharana ny Ontolojia-taranaka manaraka foto-drafitrasa rojo-bahoaka ny hanao open-source, malala-tsaina, ary ny fiaraha-miasa nozaraina matoky tontolo iainana.
Olympus ny Ontolojia dia hanome Accelerator fandaharana ara-teknika tanteraka, -barotra, famatsiam-bola, talenta, sy ny fanarahan-dalàna ara-dalàna fanohanana. Ny Ontolojia dia vola eo ho eo Foundation 1.5 lavitrisa USD worth of tokens, rehetra izay ho ampiasaina mba hanohanana ny fivoaran'ny misy hoavy startups sy ny ekipa voafidy.
Norvejiana Air CEO ny hanomboka fifanakalozana crypto
Miliaridera Norvejiana Filoha Tale Jeneralin'ny Air Bjørn Kjos dia fandefasana ny cryptocurrency fifanakalozana atao hoe Norvejiana Block Exchange, ary amin'ny mifandray naoty norvejiana Air izao manaiky cryptocurrency toy ny fandoavam-bola.
Vao maraina, ny orinasa NBX Exchange, efa natsangana $250,000 amin'ny fanangonam-bola fihodinana.
Ny tale jeneralin'ny tamin'i hoe "izahay mijery ny zavatra izay mora tena habeny… cryptocurrency manana safidy tahaka ny fandoavam-bola ao amin'ny zotram-piaramanidina, Hitantsika fa misy ilaina ny tsena lehibe iray izay afaka hividy sy hivarotra cryptocurrencies. "
NBX fatra-paniry laza manana drafitra miaraka amin'ny tanjona ny hifaninana amin'i fifanakalozana toy ny GDAX sy Kraken
$88.8M amidy manerana ny tsena amin'izao fotoana izao
irish hoy i:
Jona 13, 2018 amin'ny 5:16 PM